आँचलले श्रीमानसँग मिलेर फिल्म बनाउँदै, नायकमा पल शाह ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/आँचलले श्रीमानसँग मिलेर फिल्म बनाउँदै, नायकमा पल शाह ?
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सुन्दरीहरु विबाह लगत्तै चलचित्र क्षेत्रबाट पलायत हुँदै आएको परिप्रेक्षमा नायिका आचल शर्मा भने विबाहपछि पनि जम्ने संकेत देखाएकी छिन् । उनी नायिका मात्र नभइ अब निर्मात्री बन्ने तयारी गरेकी छन ।
जसको निर्देशक निर्देशक मिलन चाम्सले गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका छन् । चलचित्रलाई विशेष बनाउने तयारीमा आँचल र उदिप रहेका छन् । बिवाहको केहि समयपछि आँचलले मेरो परिवारले फिल्म बनाए नायकमा पल शाह हुने बताएकी थिइन् । यो बिषयले निकै चर्चा पनि पाएको थियो ।